Black And White Polka Dots Oversized Zip Up Cardigan - Buddhatrends
Vidy iray / Black & White
Jereo ary mahatsapa alahelo ao anatin'ity akanjo mainty hoditra mainty hoditra misy teboka misy pika. Ity akanjo am-paosin-doko ity dia ho fanazavana lehibe ao amin'ny efitranonao. Ataovy miaraka amin'ny leggings tianao indrindra, akanjo, kardigana, jirobe, ary jabora.
Ho lehibe ihany koa ny fanesorana azy amin'ny kiraro, ny trano, ny kapa ary ny sombin-tany. Raha te hampiditra azy io ianao, ireo akanjo lehibe sy kiraro dia azo antoka fa hahatonga azy bebe kokoa sy tsy manan-tsahala.
Ny fitongilana marevaka dia mamirapiratra tsara ny karazana vatana rehetra. Ampio iray amin'ny sarinao amin'izao fotoana izao.
Fitaovana: Cotton sy Polyester
Karazan-tsoratra: Polka Dot
Tafika Lafo daholo
Black Sweater Sweater Dress with Clutches
Black Sweater Sweater Dress with Clutches Lafo daholo
Polisy nipetrapetraka $51.20 $64.00
Plus Size V Neck Hooded Sweater Dresses $43.20 $54.00
Fanamboaran-java-manify Spring Flower Color Block Sweater Dress
Fanamboaran-java-manify Spring Flower Color Block Sweater Dress $95.00
Oversized Chunky Knit Sweater $62.00 $74.00
100% Cotton Plaid Patchwork Oversized Sweater Lafo daholo
Black and White Striped Plus Size Sweater Dress $49.60 $62.00
Deep V-neck hoody sweater sweater vest
Deep V-neck hoody sweater sweater vest $43.20 $54.00